Iindaba-Ngaba uyazi ukuba ngaba isikrini sokuqala siyatshintshwa xa kulungiswa ifowuni yakho? Ngena ndikufundise indlela yokuchonga esona sikrini kunye nescreen sokukhohlisa
Ngokwesiqhelo, sihlala sihlangana nemeko yokuba ikhusi eliphathwayo liphuke ngengozi, amanye amatyala agqitywe ngeglasi, ezinye isikrini sangaphakathi asibonisi siphukile. Umlungisi weqela lesithathu uya kukubuza ukuba uyafuna na eyokuqala okanye eqhelekileyo. Ngokubanzi, umahluko wexabiso awumkhulu, okukukukhokelela ukuba ubuyisele eyokuqala. Kodwa ngaba uyazi ukuba ngaba isikrini esitshintshileyo sesokuqala? Umhleli omncinci olandelayo ufundisa indlela yokuchonga isikrini esinyaniyo nobuxoki.
Okokuqala, siza kuthetha ngesikrini sangaphandle esilula. Njengoko besesitshilo, izikrini zoqobo ezivela kubavelisi ziindibano zescreen. Ke ngoko, oko kubizwa ngokuba zizikrini zangaphandle ezinqabileyo kunqabile kakhulu. Umahluko phakathi kweyantlandlolo kunye neyesiqhelo kwiinkampani ezininzi zolondolozo ngumahluko phakathi kweglasi engasemva kunye neglasi eqhelekileyo, kwaye zimbalwa izikrini zokwenyani zangaphandle.
Ngokubanzi, isikrini esitshintshwe ngumatshini we-Android sihlwempuzeke kakhulu. Xa sele yaphukile, kungcono nayo. Isakhono sokwahlula kukuthathela ingqalelo ukugudileyo kwe-2.5D radian yomda wesikrini kunye nenani leeyile zokuhambisa amanzi. Ngokubanzi, iinxalenye ezine-2.5D radian kwiscreen sangaphandle esingalunganga kwaye azihambi kakuhle. Ixabiso lolu hlobo lwesikrini luphakathi kwama-80 nama-90. Iscreen esihle sigudile kwaye sigudile, Uluhlu lweoyile lutyebile, kodwa ixabiso alizi kudlula kwi-yuan ezingama-300. Ukuba umntu owenza inzuzo ucela ukuba ubuze i-RMB 4500, ungahamba kwangoko. Akukho sidingo sokuyilungisa apha. Ngenxa yemfuno enkulu kunye nokuhanjiswa okugqibeleleyo kwescreen sangaphandle seApple, umgangatho wescreen sangaphandle ulunge kakhulu, unokuthelekiswa nescreen sokuqala, kwaye ixabiso alikho ngaphezulu kwe-yuan ezingama-300.
Zininzi izikrini zokuqala kwintengiso yebandla lesikrini, ezenziwe ngeendlela ezahlukeneyo ezizodwa. Zininzi iintlobo zezikrini ezingezizo ezokuqala, kubandakanya iscreen soxinzelelo lwangaphambili kunye nembasa yokugubungela indawo, iscreen seLCD kunye notshintsho lwentambo okanye isibane esingasemva, isikrini sokulinganisa esiphezulu, njl.njl.emva kokufunda iintlobo, ungathetha ngokuthe ngqo ngezakhono.
Kule mihla, uninzi lweefowuni eziphathwayo zizikrini ze-OLED, ezixabisa imali eninzi. Ewe ixabiso lokutshintsha isikrini liphezulu. Nangona kunjalo, baninzi abaxhamli abakhohlakeleyo abangafuniyo ukubuyisela ikhusi eliyintsusa, kodwa bakwenze endaweni yeLCD enye le nto ibiza ixabiso eliphantsi, kuba oku kunokuthiwa kuyinzuzo, isikrini sinokufumana i-500 okanye I-600 yuan, ngaphandle ayibonakali, ukuba sihlangabezana noku, singathatha iglasi yokukhulisa ukuze siyichonge.
Lungisa isikrini kwiscreen esimhlophe ngaphandle kokubhaliweyo okanye ipateni kangangoko kunokwenzeka, kwaye ujonge ulungelelwaniso lwepikseli yesikrini ngeglasi yokuqaqambisa. Njenge-iPhone X kunye nochungechunge lwasentla, uninzi lweeflegi zasekhaya lilungiselelo le-pentale yangaphantsi yepikseli ye-Samsung, njengale ingentla.
I-Huawei P30 pro kunye neqabane lama-20 Pro ngamalungiselelo e-BOE's "Zhou Dongyu", kunye nelungiselelo eliqhelekileyo le-LG, njengoko kubonisiwe kulo mzobo ungasentla,
Ukutshintshwa kweLCD kwahluke kakhulu. Uninzi lwazo lucwangciswe ngendlela yoxande ye-RGB. Njengoko kubonisiwe kulo mzobo ungasentla, ukuba ufumanisa ukuba ifowuni yakho ephathwayo ekuqaleni iyisikrini se-OLED kwaye ithathelwe indawo yiLCD ngungeniso, ungayisebenzisa le ndlela ukuya kuye ngokukhawuleza ukuze ulahlekelwe yimali.
Enye indlela kukuchonga ukuba ngaba iscreen sangaphandle kwale ndibano siyintsusa, kanye ngale ndlela ingentla. Ukongeza, isikrini asinakuba siphezulu kakhulu kunomda emva kokutshintsha iscreen. Ngokubanzi, indibano yesikrini engeyoyokuqala iya kuba nkulu kuneyasekuqaleni. Ke kuya kubakho ukubalasela.
Le ingasentla yindlela yokwenza eyakho. Ndiyathemba ukuba izokukunceda.